ဟင်္သာတတွင် တစ်​အိမ်​တည်း​နေ ခဲအိုဝမ်းကွဲ​တော်​သူမှ (4)တန်း​ ကျောင်းသူ​လေးအား အကြိ်​မ်​ကြိမ်​သားမယားဖြစ်​ပြုကျင့်​ - Tameelay
ဟင်္သာတတွင် တစ်​အိမ်​တည်း​နေ ခဲအိုဝမ်းကွဲ​တော်​သူမှ (4)တန်း​ ကျောင်းသူ​လေးအား အကြိ်​မ်​ကြိမ်​သားမယားဖြစ်​ပြုကျင့်​
အမှုမှာ 14.2.2018 ရက်​​နေ့ 19:00အချိန်​တွင် တရားလို​ ​ဒေါ်ဧရာလင်းထွန်း မြရပ်​ကွက်​ သုံးပင်​ကွင်း ရပ်​ကွက်​ ဟင်္သာတမြို့​နေသူမှ မ…..၊အသက်​(10)နှစ်​၊ (ဘ)ဦး ………၊ …..လမ်း၊ ……..ရပ်​ကွက်​ ဟင်္သာတမြို့​နေသူအား တစ်​အိမ်​တည်း​နေ ၎င်း၏ခဲအိုတစ်​ဝမ်းကွဲ​တော်​စပ်​သူမှ သားမယားအဖြစ်​ပြုကျင့်​​ကြောင်း သတင်းကြားသဖြင့်​ ​ဒေါ်ဧရာလင်းထွန်း(တရားလွတ်​​တော်​​ ရှေ့​နေ)ဦးကိုကိုဦး (​စေ/လူမှုဝန်​ထမ်​ဦးစီးအရာရှိ တို့မှ ——– အုပ်​ချုပ်​မှူးဦးခင်​ဝင်း၏​နေအိမ်​၌ ဆယ်​အိမ်​မှူးဦးအောင်​နိုင်​ဝင်း၊ အပြင်​ကျူရှင်​ဆရာမ​ဒေါ်..နှင့်​အတူ ပြုကျင့်​ခံရသူ မ…………အား​တွေဆုံ​မေးမြန်းရာ ၎င်း အား တစ်​အိမ်​တည်း​နေ အမဝမ်းကွဲ၏​ယောင်္ကျားဖြစ်​သူ ရဲဝင်း အသက်​23နှစ်​ ၊ (ဘ)ဦးထွန်းဝင်း၊ ………လမ်း၊ ………… ရပ်​ကွက်​၊ဟင်္သာတမြို့​နေသူမှ ​နေအိမ်​၌သား မယားအဖြစ်​ပြုကျင့်​ခဲ့​ကြောင်း
၎င်း၏မအင်္ဂါကို ပြုကျင့့်​ရာနာကျင်​၍ အော်​သဖြင့်​ဆန့်​ကျင်​ဘက်​​နေရာအား ထပ်​မံပြုကျင့်​ခဲ့ပြီး ရဲဝင်းမှ ၎င်း၏အမျိုးသားအင်္ဂါကို ပါးစပ်​ဖြင့်​ – ခိုင်း​ကြောင်း 3.2.2018​နေ့က​နောက်​ဆုံးအကြိမ်​ပြုကျင့်​ခဲ့​ကြောင်း၊ ယခင်​ကလည်း(ရက်​စွဲမမှတ်​မိ) ထိုကဲ့သို့ နှစ်​ကြိမ်​တိုင်​တိုင်​ ပြုကျင့်​​ ကြောင်း​ မ…………မှပြောပြသိရှိရ၍ အရွယ်​မ​ရောက်​​ သေး​သော က​လေးငယ်​အားပြုကျင့်​သူ ရဲဝင်းအား ဥပ​ဒေအရအ​ရေးယူ​ပေးရန်​ တရားလို ​ဒေါ်ဧရာလင်းထွန်းမှတရားလိုပြုလုပ်​တိုင်​ကြားသဖြင့်​ ဟင်္သာတမြို့မရဲစခန်း စခန်းမှူးဒုရဲမှူးခင်​​မောင်​ထွန်းမှ(ပ)146/2018 ရာဇသတ်​ ကြီးပုဒ်​မ 376/337 ဖြင့်​ အမှုဖွင့်​ဆက်​လက်​စစ်​​ဆေးအ​ရေးယူထား ​ကြောင်းသိရှိရသည်​။
ဟင်ျသာတတှငျ တဈ​အိမျ​တညျး​နေ ခဲအိုဝမျးကှဲ​တျော​သူမှ (4)တနျး​ ကြောငျးသူ​လေးအား အကျွိ​မျ​ကွိမျ​သားမယားဖွဈ​ပွုကငျြ့​
အမှုမှာ 14.2.2018 ရကျ​​နေ့ 19:00အခြိနျ​တှငျ တရားလို​ ​ဒျေါဧရာလငျးထှနျး မွရပျ​ကှကျ​ သုံးပငျ​ကှငျး ရပျ​ကှကျ​ ဟင်ျသာတမွို့​နသေူမှ မ…..၊အသကျ​(10)နှဈ​၊ (ဘ)ဦး ………၊ …..လမျး၊ ……..ရပျ​ကှကျ​ ဟင်ျသာတမွို့​နသေူအား တဈ​အိမျ​တညျး​နေ ၎င်းငျး၏ခဲအိုတဈ​ဝမျးကှဲ​တျော​စပျ​သူမှ သားမယားအဖွဈ​ပွုကငျြ့​​ကွောငျး သတငျးကွားသဖွငျ့​ ​ဒျေါဧရာလငျးထှနျး(တရားလှတျ​​တျော​​ ရှေ့​နေ)ဦးကိုကိုဦး (​စေ/လူမှုဝနျ​ထမျ​ဦးစီးအရာရှိ တို့မှ ——– အုပျ​ခြုပျ​မှူးဦးခငျ​ဝငျး၏​နအေိမျ​၌ ဆယျ​အိမျ​မှူးဦးအောငျ​နိုငျ​ဝငျး၊ အပွငျ​ကြူရှငျ​ဆရာမ​ဒျေါ..နှငျ့​အတူ ပွုကငျြ့​ခံရသူ မ…………အား​တှဆေုံ​မေးမွနျးရာ ၎င်းငျး အား တဈ​အိမျ​တညျး​နေ အမဝမျးကှဲ၏​ယောကငြ်ျားဖွဈ​သူ ရဲဝငျး အသကျ​23နှဈ​ ၊ (ဘ)ဦးထှနျးဝငျး၊ ………လမျး၊ ………… ရပျ​ကှကျ​၊ဟင်ျသာတမွို့​နသေူမှ ​နအေိမျ​၌သား မယားအဖွဈ​ပွုကငျြ့​ခဲ့​ကွောငျး
၎င်းငျး၏မအင်ျဂါကို ပွုကငျြ့​ရာနာကငျြ​၍ အျော​သဖွငျ့​ဆနျ့​ကငျြ​ဘကျ​​နရောအား ထပျ​မံပွုကငျြ့​ခဲ့ပွီး ရဲဝငျးမှ ၎င်းငျး၏အမြိုးသားအင်ျဂါကို ပါးစပျ​ဖွငျ့​ – ခိုငျး​ကွောငျး 3.2.2018​နကေ့​နောကျ​ဆုံးအကွိမျ​ပွုကငျြ့​ခဲ့​ကွောငျး၊ ယခငျ​ကလညျး(ရကျ​စှဲမမှတျ​မိ) ထိုကဲ့သို့ နှဈ​ကွိမျ​တိုငျ​တိုငျ​ ပွုကငျြ့​​ ကွောငျး​ မ…………မှပွောပွသိရှိရ၍ အရှယျ​မ​ရောကျ​​ သေး​သော က​လေးငယျ​အားပွုကငျြ့​သူ ရဲဝငျးအား ဥပ​ဒအေရအ​ရေးယူ​ပေးရနျ​ တရားလို ​ဒျေါဧရာလငျးထှနျးမှတရားလိုပွုလုပျ​တိုငျ​ကွားသဖွငျ့​ ဟင်ျသာတမွို့မရဲစခနျး စခနျးမှူးဒုရဲမှူးခငျ​​မောငျ​ထှနျးမှ(ပ)146/2018 ရာဇသတျ​ ကွီးပုဒျ​မ 376/337 ဖွငျ့​ အမှုဖှငျ့​ဆကျ​လကျ​စဈ​​ဆေးအ​ရေးယူထား ​ကွောငျးသိရှိရသညျ​။
အရမ်းသနားဖို့​ကောင်းတာပဲ သနားစရာ ချစ်ပုံပြင်
အရမ်းသနားဖို့​ကောင်းတာပဲ သနားစရာ ချစ်ပုံပြင် ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက သူဋ္ဌေးကြီးတစ်ယောက်မှာ အင်မတန်မှ ချောမောလှပတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက် ရှိသတဲ့… သူဋ္ဌေးကြီးကလည်း သူ့သမီးလေးကို တစ်အားချစ်ဆိုပဲ….. ဘယ်လောက်ချစ်သလဲဆို ရဲတိုက်ကြီးတစ်ခုမှာ တစ်ယောက်တည်းထားတာတဲ့….. ဘယ်သူနဲ့မှ မပေးစားနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့. …. ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီရဲတိုက်ကြီးရဲ့ မနီးမဝေးမှာ ပန်းဥယျဉ်ကြီးတစ်ခုရှိသတဲ့…. အဲ့ဒီပန်းဥယျဉ်ကြီးဟာ…..သာယာလှပလွန်းလို့ မြင်သူတိုင်း ငေးရတယ်ဆိုပဲ….. …
တရုတ်နိုင်ငံမှ လူဘော (ဝှေးစေ့) တစ်လုံးလျှင် ၁၇ သိန်း နှုန်းဖြင့် ရသလောက်ဝယ်ယူ တရုပ်နိုင်ငံတွင် 2017ခုနှစ် အောက်တိုဘာလအတွင်းဆေးပညာရှင်များလေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေ့ရှိချက်အရ ကျန်းမာ၍အသက်ရှည်နုပျိုစေရန်အတွက် ဝှေးစေ့သည် အထူးကောင်းမွန်ကြောင်း တနှစ်လျှင် ဝှေးစေ့တစ်လုံး စားသုံးသင့်ကြောင်း ဝှေးစေ့စားသုံးသော လူများအား ထပ်မံလေ့လာရာလူတစ်ရာတွင် ၉၈%မှာ hiv ကင်ဆာ နှင့်အခြားရောဂါများ အမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းကြောင်းသိရပါတယ် …
ဖုန်းနဲ့ပဲ တစ်ချိန်လုံး အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ ဖေဖေ မေမေတွေ ဒီစာလေး ဖတ်မိပါစေ….
မေမေဟာ သမီးလေးရဲ့ အပြုအမူလေးတွေ လွတ်သွားမစိုးလို့ တဖျတ်ဖျတ် ဓါတ်ပုံ ရိုက်နေပါတယ်…. ရိုက်ပြီးသား ဓါတ်ပုံတွေ သူ့ဖေဖေဆီကိုပို့လိုက်…ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်ကြည့်လိုက်…. အမျိုးတွေဆီပို့လိုက်နဲ့… စိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်နေပါတယ်… မေမေ သမီးလေးကို မြှူနေတာက ဖုန်း စခရင်ကနေ တဆင့်ပါ… သမီးလေးရဲ့ ကြည်လင်နေတဲ့ မျက်လုံးလေးကို တိုက်ရိုက်မကြည့်မိတာကို မေမေ သတိမထားမိဘူးလေ… …